Roa Piece WCB Trunnion nitaingina Flanged Ball Valve ANSI Class 600LB, China Two Piece WCB Trunnion Mounted Flanged Ball Valve ANSI Class 600LB Mpanamboatra, mpamatsy, Factory - Zhejiang Huaxia Flow Technology Co., Ltd (Titan valve no marika)
Valizy Ball nitaingina Trunnion
Sakafo sy zavatra simika
Marina sy LNG
Oil sy ny Gas
Preview momba ny fampirantiana
Home>Products>Valizy Ball nitaingina Trunnion
Roa WCB Trunnion roa nitaingina Valve Ball Valve ANSI Kilasy 600LB
Ny kalitaon'ny valizy Titan dia azo antoka amin'ny alàlan'ny fanarahana tanteraka ny fenitra kalitaon'ny ISO 9001 sy API Q1. Natokana hanomezana vokatra avo lenta avo lenta mifanaraka amin'ny andrasan'ny mpanjifa, ny valizy Titan dia novokarina mifanaraka amin'ny ASME, API ary ny fenitra hafa rehetra.
Ny valva rehetra dia voasedra sy voarakitra amin'ny takiana fitiliana API 6D ary novokarina mba hanarahana ny fenitra NACE MR0175 miaraka amin'ny MTR traceab feno.
● habe: 2 "-20"
● Fitaovana feno azo zahana
● Pad mounting ISO 5211
● Safidy fitaovana
● Torolàlana miasa ambany
● Anti-mitsoka porofon-porofo
● Fitaovana fanoherana ny static
● Mifanaraka amin'ny NACE MR0175
● Horonan-tsary fitsapana 100%
● Fanamaivanana ny tsindry rongony
Rehefa ambany noho ny hery noforonina tamin'ny tsindry tsipika ny hery noforonin'ny tsindry kaoka dia azo antoka ny manome tombo-kase henjana.
Rehefa avo kokoa noho ny herin'ny lohataona seza miampy tsindry ny tsindry ny lavaka, ny hetsika manala tena dia mamela ny seza valizy hifindra somary lavitra ny velaran'ny baolina. Noho izany, ny tsindry mihoatra ny vatan'ny vatana dia alefa ao anaty fantsona hamerenana amin'ny laoniny ny fifandanjana eo anelanelan'ny lava-batana sy ny fantsona (na ny ilany ambony na ny ilany).
● Fanoherana fanoherana fipoahana
Ny tsorakazo dia vita misaraka amin'ny baolina. Ny soroka tsy mitombina eo amin'ny faran'ny farany ambany amin'ny hazo dia alao antoka fa porofon'izany izy.
● Famehezana ny vatany sy ny fotony
Ny famolavolana tombo-kase indroa an'ny O-Rings sy ny gasket grafite azo antoka amin'ny afo dia miantoka ny famoahana aotra amin'ny vatana sy ny fifandraisana mihidy. Ny fivoahana mety hitranga avy amin'ny faritra misy valizy dia nosakanan'ny tombo-kase O-Ring roa sy gasket ny fihary.
● Fitaovana manohitra ny statika
Ny valves baolina rehetra flanged dia misy rafitra fitomboan-tany roa manomboka amin'ny fotony ka hatramin'ny baolina ary avy amin'ny vatana. Misy fiasa manohitra ny statika omena mba hiantohana ny fitohizan'ny herinaratra.
● Volavola azo antoka amin'ny afo
Ny fananganana fiarovana azo antoka amin'ny afo dia mahazatra amin'ny valizy baolina napetraka rehetra. Amin'ny toe-java-misy afo, rehefa avy niharatsy ny peratra O-peratra, ny fihary ao, ny fatana amin'ny vatana ary ny famonosana ny lozisialy azo antoka ny afo dia manakana ny famoahana ivelany. amin'ny alàlan'ny famoahana.
● Sakanana indroa ary mandeha rà
Amin'ny toerana mihidy, ny seza tsirairay dia manidy ny fampitam-baovao tsy miankina amin'ny lafiny tsirairay na miaraka amin'ny andaniny roa amin'ny baolina, ny lavaka dia azo alefa na mandeha rà amin'ny alàlan'ny valizy na valves mihodina amin'ny vatan'ny valizy. DIB azo alaina amin'ny fangatahana.
● Rafitra fanindronana tombo-kase tampoka
Valizy baolina mitaingina Titan trunnion dia misy fantsom-panafody tombo-kase tombo-kase amin'ny faritra misy ny fotony sy ny fipetrahana eo ambonin'ny vatana. Ireo fittings ireo dia ahitana valve check mba hanolotra tombo-kase nomaniny ho solon'izay. Raha misy ny fivoahana amin'ny seza na ny faritra amboarana ny fotony, dia azo ajanona vetivety izy amin'ny alàlan'ny tsindrona tombo-kase ao amin'ny rafitra famehezana faharoa.
● Volavola fijanonana ao anatiny
Ny famolavolana lakile sy ny tsorakazo dia manome mora sy marina misokatra tanteraka sy akaiky ho an'ny actuator.
● Safidy famolavolana seza peratra Delta
Ny fitaovan'ny peratra delta dia elastomer izay manana elastika tsara kokoa, afaka mandray ny fiparitahan'ny baolina mba hahatanteraka mora foana ny aotra, indrindra ho an'ny baolina lehibe na baolina austenitika na valizy milina feno. Ity safidy ity dia azo alaina amin'ny fangatahana.
Lipseal dia tombo-kase feno herin'ny lohataona ahitana Elgiloy na lohataona inconel miaraka amin'ny palitao PTFE. Manolo-kevitra fatratra ny haino aman-jery simika manimba, ny gazy marikivy avo, ny serivisy ambany ary ny serivisy cryogenika.
Ny fenitra azo ampiharina
Thickness Wall ASME B16.34 & API6D
Mifanatrika ASME B16.10
Afo azo antoka API 607 ​​& API 6FA
Fitsapana ny fanerena API 6D
Volavola fototra ASME B16.34
Fizarana mahazatra sy fitaovana 2 "-4"
TSIA. faritra FITAOVANA
3 mitondra 316 + PTFE
4 Gasket ambany 316 + Graphite
6 ambany ASTM A105 + 3 mil ENP
8 Drain Plug ASTM A276 316
9 visy ASTM A193 B7M
10 mitondra 316 + PTFE
12 Body Gasket 316 + Graphite
13 -bazana ASTM A194 2HM
14 Stud ASTM A193 B7M
15 fanakatonana ASTM A216 WCB
16 Fitaovana manohitra ny statika ASTM A276 316
17 Washer thrust PTFE
18 mitondra 316 + PTFE
19 SAMPA AISI 4140 + 3 mil ENP
20 Gasket manjarano
21 Tanana tanana ASTM A276 410
22 visy ASTM A193 B7M
23 fonosana manjarano
24 Glans AISI 1045
25 visy ASTM A193 B7M
26 Takelaka misy toerana CS + ZN
29 Hazavao ASTM A216 WCB
31 rivotra ASTM A276 316
34 Seza lohataona ASTM A105 + 3 mil ENP
35 Gasket manjarano
36 Mpitazona seza ASTM A105 + 3 mil ENP
38 Seza ampidiro RPTFE / Devlon® / PEEK
2 -bazana ASTM A194 2HM
3 Tohano ny zioga CS + ZN
4 Stud ASTM A193 B7M
5 -bazana ASTM A194 2HM
6 fanakatonana ASTM A216 WCB
7 Body Gasket 316 + Graphite
9 Gasket ambany manjarano
10 ambany ASTM A105
12 visy ASTM A193 B7M
15 Drain Plug ASTM A276 316
16 mitondra 316 + PTFE
18 Tsindrona menaka ASTM A276 316
19 Vent Plug ASTM A276 316
20 Fitaovana manohitra ny statika ASTM A276 316
21 mitondra 316 + PTFE
22 Tanana tanana ASTM A276 410
23 SAMPA AISI 4140 + 3 mil ENP
25 Gasket manjarano
28 fonosana manjarano
29 Kitapo fonosana ASTM A276 410
30 Fitaovana DI
32 Glans AISI 1045
33 visy ASTM A193 B7M
34 visy ASTM A193 B7M
35 Washer thrust PTFE
36 Stud ASTM A193 B7M
37 -bazana ASTM A194 2HM
39 Mpitazona seza ASTM A105 + 3 mil ENP
41 Mpitazona lohataona ASTM A105 + 3 mil ENP
42 Fantsona Gasket manjarano
Data momba ny refy
Size d L D2 D1 D T f n-d1 H W Milanja KG
Roa WCB Trunnion roa nitaingina Valve Ball Valve ANSI Kilasy 300LB
Roa CF8M Trunnion mitaingina Valve Ball Flanged ANSI Kilasy 150LB
Roa WCB Trunnion roa nitaingina Valve Ball Valve ANSI Kilasy 150LB
API 6D Three Piece Forged Trunnion Mounted flanged Ball Valve
© 2020 Zhejiang Huaxia Flow Technology Co., Ltd (Titan valizy no marika). Zo rehetra voatokana.
Zhejiang Huaxia Flow Technology Co., Ltd (Titan valizy no marika)
[email voaaro] [email voaaro]
No. 3 Street Industrial, Wenzhou, Zhejiang, Sina